Grammy ဆုပေးပွဲမှာ ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ပူးပေါင်းဖျော်ဖြေမှုကို မြင်တွေ့ရတော့မှာလား? – Trend.com.mm
နာမည်ကျော်အဆိုတော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Miley Cyrus နဲ့ Shawn Mendes တို့ဟာ လာမယ့် တနင်္ဂနွေ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့် Grammy ဆုပေးပွဲမှာ နှစ်ယောက်အတူဖျော်ဖြေသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ရှိလာပါတယ်။
ဘာလို့ ဒီသတင်းတွေထွက်ရှိလာရသလဲဆိုရင် Miley က သူမရဲ့ အင်စတာဂရမ်မှာ Grammy ပွဲအတွက် လေ့ကျင့်နေတဲ့အကြောင်း ဆဲလ်ဖီပုံလေးတင်ခဲ့လို့ပါပဲ။အဲ့ဒီမှာ တစ်ချို့သောပရိသတ်တွေက Miley ရဲ့အနောက်မှာ Shawn ရဲ့ အပြာရောင်ဂစ်တာလေးကို မြင်တွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် ပရိသတ်တွေက Shawn နဲ့ပူးပေါင်းဖျော်ဖြေဖို့ လုပ်နေတာလားဆိုပြီးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။အတည်ပြုဖြေကြားထားတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။
Shawn ကလည်း Miley ရဲ့ အဲ့ဒီပိုစ့်လေးကို တွစ်တာမှာပြန် share ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါက သူတို့နှစ်ယောက်အတူပူးပေါင်းဖျော်ဖြေဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လား၊တစ်ယောက်ချင်းစီပဲ သီးသန့်လေ့ကျင့်နေကြတာမျိုးကိုဆိုလိုတာလား သေချာမသိသေးပေမဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ ၀မ်းသာနေကြပါတယ်။တကယ်ပဲ ပူးပေါင်းဖျော်ဖြေသွားကြမှာလားဆိုတာတော့ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့မှာမှ မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရော သူတို့ အတူဖျော်ဖြေတာ မြင်တွေ့ချင်ကြလား?
နာမညျကြျောအဆိုတျောတှဖွေဈကွတဲ့ Miley Cyrus နဲ့ Shawn Mendes တို့ဟာ လာမယျ့ တနင်ျဂနှေ ဖဖေျောဝါရီ ၁၀ရကျနမှေ့ာကငျြးပမယျ့ Grammy ဆုပေးပှဲမှာ နှဈယောကျအတူဖြျောဖွသှေားမယျဆိုတဲ့သတငျးတှထှေကျရှိလာပါတယျ။
ဘာလို့ ဒီသတငျးတှထှေကျရှိလာရသလဲဆိုရငျ Miley က သူမရဲ့ အငျစတာဂရမျမှာ Grammy ပှဲအတှကျ လကေ့ငျြ့နတေဲ့အကွောငျး ဆဲလျဖီပုံလေးတငျခဲ့လို့ပါပဲ။အဲ့ဒီမှာ တဈခြို့သောပရိသတျတှကေ Miley ရဲ့အနောကျမှာ Shawn ရဲ့အပွာရောငျဂဈတာလေးကို မွငျတှသှေ့ားခဲ့ပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ပရိသတျတှကေ Shawn နဲ့ပူးပေါငျးဖြျောဖွဖေို့ လုပျနတောလားဆိုပွီးမေးမွနျးခဲ့ပါတယျ။အတညျပွုဖွကွေားထားတာမြိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။
Shawn ကလညျး Miley ရဲ့အဲ့ဒီပိုဈ့လေးကို တှဈတာမှာပွနျ share ထားခဲ့ပါတယျ။ဒါက သူတို့နှဈယောကျအတူပူးပေါငျးဖြျောဖွဖွေဈမယျဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျလား၊တဈယောကျခငျြးစီပဲ သီးသနျ့လကေ့ငျြ့နကွေတာမြိုးကိုဆိုလိုတာလား သခြောမသိသေးပမေဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ ဝမျးသာနကွေပါတယျ။တကယျပဲ ပူးပေါငျးဖြျောဖွသှေားကွမှာလားဆိုတာတော့ဖဖေျောဝါရီ ၁၀ ရကျနမှေ့ာမှ မွငျတှရေ့မှာပဲဖွဈပါတယျ။ပရိသတျကွီးရော သူတို့ အတူဖြျောဖွတော မွငျတှခေ့ငျြကွလား?
မိတ်ကပ်နဲ့မျက်နှာ တစ်သားတည်းကျစေဖို့ အသားရည် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ